Usuku lokuqala lwamakilasi - Isikole soLimi se-BLI eCanada
Uyemukelwa kwi-BLIUsuku Lakho Lokuqala
Silangazelela ukunamukelaUsuku lwakho lokuqala lwamakilasi
Ngosuku lwakho lokuqala esikoleni, abasebenzi bethu abanobungane nabanolwazi bazokwamukela lapho ufika. Kuzoba neseshini yokufunda bonke abafundi abasha ukuze bazi izinqubomgomo zethu zesikole. Ngesikhathi seseshini, sizokunikeza nesingeniso ngedolobha, imininingwane yendawo yokuhlala kanye nemisebenzi eyenziwa esikoleni. Uzothola ikhithi lolwazi elenzelwe kahle ukukusiza uqonde yonke imininingwane ehlobene nesikole nayo yonke imininingwane ebalulekile ephathelene nedolobha.
Sizothatha isithombe sakho futhi sikunikeze ukuvakasha kwesikole nendawo ezikuyo ukukusiza ukuba ujwayele imvelo entsha.
Siyaqonda ukuthi uzoba novalo ngosuku lokuqala, kepha qiniseka ukuthi abasebenzi bethu bokuphatha kanye nothisha bazokuqondisa kule nkathi yokuzivumelanisa nezimo. Khumbula ukuthi siyohlala sikukhona ukukunakekela futhi siphendule yonke imibuzo yakho.
Lokhu ukubuka konke okujwayelekile okuzokwenzeka ngosuku lwakho lokuqala:
Ukuhlolwa kokubekwa ngomlomo
Ukuhamba ngezinyawo kwendawo ezungeze isikole
Hlela isabelo nokuthenga izincwadi
Ukuthathwa kwesithombe sobunikazi besikole